नेपालीहरूको मन जित्न यसरी लागिपरेका छन् मोदी, के साँच्चै जित्लान त नेपालीकाे मन! – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेपालीहरूको मन जित्न यसरी लागिपरेका छन् मोदी, के साँच्चै जित्लान त नेपालीकाे मन!
नेपालीहरूको मन जित्न यसरी लागिपरेका छन् मोदी, के साँच्चै जित्लान त नेपालीकाे मन!
admin May 8, 2018 समाचार 0
काठमाडौं । अघोषित नाकाबन्दीपछि नेपालमा आलोचित बनेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यसपटकको नेपाल भ्रमणमा उनीमाथि लागेको कोलो दाग मेटाउने रणनीतिमा छन् । दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि यही बैशाख २८ गते नेपाल आउन लागेका मोदीले नेपाली जनताको मन जित्ने रणनीतिहरु बारे निकटस्थहरुसँग परामर्श गरिरहेको स्रोतले जनायो । उनी भ्रमणको दौरानमा नेपालमा यसपटक २९ घण्टा रहने बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणमा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका मोदीको यो भ्रमण तेस्रो पटक हुन्छ । उनी यसअघि दुई पटक नेपाल भ्रमणमा आइसकेका छन् । भारतको इतिहासमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले एउटै कार्यकालमा नेपालको तीन पटक भ्रमण गरेको यो पहिलो हो । हुन त मोदी पुनः अर्को कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का छ ।
यसपटक मोदीले नेपाल भ्रमणलाई धार्मिकसहित राजनीतिक बनाउने प्रयास गरेका छन् । त्यसको लागि उनले जनकपुरबाट भ्रमणको सुरुवात गर्दैछन् । हुन त मोदीले यसअघि नेपाल आउँदापनि जनकपुरको भ्रमण गर्ने ईच्छा प्रकट गरेका थिए । विविध कारणले उनको भ्रमण हुन सकेको थिएन् । अहिले भने उनलाई जनकपुर भ्रमण गर्ने साईत जुरेको छ ।
मोदी भाषण गर्न सिप्पालु छन् । उनको कौशलतापनि भाषणप्रतिको निपुणता नै हो । पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गर्दा उनले संविधान सभामा सम्बोधन गर्दै सम्पूर्ण नेपालीहरुको मन जितेका थिए ।
यसपटक पनि उनले नेपालीहरुको मन जित्नेगरि सम्बोधन गर्ने तयारी गरिसकेको भारतीय उच्च स्रोतले जनायो । स्रोतले भन्यो,‘मोदीले नेपालीहरुको मन जितेरै छाड्नुहुन्छ, उहाँको तयारी त्यस्तै छ।’
स्रोतका अनुसार मोदीले यसपटक नेपालको तीन ठाउँमा भ्रमण गर्दैछन् । जनकपुरमा उनलाई भव्य नागरिक अभिनन्दन गरिँदैछ । मोदीले जनकपुरमा मैथलीमा र काठमाडौंमा नेपालीमा आफ्नो सम्बोधनको सुरुवात गर्ने स्रोतको दाबी छ ।
युवाहरू बीच पूर्वराजकुमार पारस शाहकाे बढ्दो क्रेज, बाैद्धनाथमा जे देखियो – भिडियो